pressa - Wikibolana, raki-bolana malalaka
6.1 Bika matoanteny
pressa ♦ X-SAMPA : ♦ AAI :
endriky ny lazaina ambehivavy ploraly ny teny la
pressa ♦ X-SAMPA : ♦ AAI : fanononana ?
mamihina, manery, mangaika, mandetsy, mamina, mamenjafenja, mamia, mamozeka, manaporitra, mandodona, manonta, mifify, mitampify, mitampisaka, itampifina, mpanao gazety Avy amin'ny dikantenin'i press teo amin'i Wikibolana anglisy.
dodona, dodona Avy amin'ny dikantenin'i hurry teo amin'i Wikibolana anglisy.
mamenjafenja, mamia, mamihina, mamina, mamozeka, manaporitra, mandetsy, mandodona, manery, mangaika, manonta, mifify, mitampify, mitampisaka, itampifina Avy amin'ny dikantenin'i press teo amin'i Wikibolana anglisy.
manaporitra, mandetsy, mandodona, manery Avy amin'ny dikantenin'i hurry teo amin'i Wikibolana anglisy.
Mpanao fahatelo ny singiolary ny efa lasa tsotra ny matoanteny presser
mamenjafenja, mamia, mamihina, mamina, mamozeka, manaporitra, mandetsy, mandodona, manery, mangaika, manonta, mifify, mitampify, mitampisaka, itampifinaAvy amin'ny dikantenin'i press teo amin'i Wikibolana anglisy.
sefosefo, hafainganina, mehina
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=pressa&oldid=28059269"
Anarana iombonana amin'ny teny napolitanina
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny napolitanina
Matoanteny amin'ny teny soedoa
Voaova farany tamin'ny 6 Jiona 2019 amin'ny 22:58 ity pejy ity.